तपाईंले सुन्दर र सुन्दर पारिजात फूलहरू लगाएको अवश्य देखेको हुनुपर्छ।
तर, के तपाईंले कहिल्यै पारिजात उर्फ हर्सिंगारको पातबाट बनेको चिया पियाउनुभएको छ वा स्वास्थ्य र सौन्दर्य उपचारको लागि यसको फूल, बीउ वा बोक्राको प्रयोग गर्नुभएको छ ? यदि तपाईंलाई थाहा छैन भने, त्यसोभए तपाईंले यसको चमत्कारी औषधीय गुणहरूको बारेमा थाहा पाउनु आवश्यक छ।
लामखुट्टेले किन अरुलाई भन्दा बढी तपाईंलाई टोक्छ ? यस्तो छ कारण